USimona-uYesu, uThixo oQela-ukuBala uBukumkani
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona Nge-8 ka-Epreli 2021:
Ndabona uMama: wayenxibe zonke ezimhlophe; entloko wayenekhuselo elimhlophe elimhlophe eligcwele amachaphaza egolide kunye nesithsaba sokumkanikazi, emagxeni akhe ingubo enkulu emhlophe enemiphetho yegolide; ingubo leyo yayigcinwe ivuliwe ziingelosi ezininzi. Kwisandla sakhe sasekunene uMama wayenentonga yobukhosi kwaye ngasekhohlo kwakhe iRosari eNgcwele eyayisehlela ezinyaweni zakhe, ezazibekwe emhlabeni. Ilokhwe kamama ibimhlophe imiphetho egolide kwaye ebhinqe ibhanti legolide esinqeni sakhe. Makadunyiswe uYesu Krestu…
Bantwana bam abathandekayo, ndiza kuni ndinizisela uthando noxolo, ukunibamba ngesandla ndikukhokelele kuNyana wam uYesu. Uyakuthanda kwaye ulinde wena ngezandla ezivulekileyo; Unkqonkqoza emnyangweni weentliziyo zakho - njengendoda elihlwempu ilinde amalizo, ke ulindele umqondiso wothando oluvela kuwe. Njengoko umngqibi elinda ngesandla esoluliweyo, ngoko ulindele ukuba wolule isandla sakho kuye, uvumele ukubanjwa ngesandla kwaye uvumele ukukhokelwa. Bantwana bam, kode kube nini nihamba ngaphandle kwakhe?
Bantwana bam, akukho thando ngaphandle kukaYesu, akukho lubabalo, akukho luxolo: nguYe kuphela onokufumana uvuyo lwenene. Ndiyakuthanda, bantwana bam: INkosi ilindele ukuba uthathe inyathelo ngakuYe, ilindele wena ukuba uyinike isandla sakho; Ulinde nina ngezandla ezivulekileyo, kodwa ukuba nina bantwana bam anithathi eli nyathelo, ukuba animmemi ukuba abe yinxalenye yobomi benu, akanakungena, akanakho ukutshintsha azalise iintliziyo zenu. Bantwana, iNkosi ayingeni ebomini benu ngobundlobongela: ilindele nina ukuba niyimemele ukuba yinxalenye yayo. Ndiyanithanda, bantwana bam, kwaye ndiyanicela ukuba nivule iingcango zeentliziyo zenu, zobomi benu eNkosini, nize nizigcwalise ngalo lonke ufefe nentsikelelo. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama ukuza kum.
Owu Nkosi Yesu, uthobeke kangakanani!
Uyakuthanda njengoko uphambene angathanda… kwaye,
singabo baphambana ngokungalwamkeli uthando lwakho.
Yesu, ndivula intliziyo yam kuwe. Yesu, ndiyakwamkela.
Ndithembele kuwe Yesu.
Ndingumngqibi wenene, ndifuna inceba yakho rhoqo,
← UAngela - Isixhobo soNqoba
Pedro - Bambalwa Abaza Kuhlala… →